Otu esi eme ka & gbanyụọ AppArmor na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Otu esi eme ka & gbanyụọ AppArmor na Ubuntu 20.04
August 25, 2021 by Jọshụa James
Na-arụ ọrụ na AppArmor System Commands
Nyochaa ọkwa profaịlụ AppArmor
Gbanyụọ ma mee ka profaịlụ ngwa ngwa
Sistemụ arụmọrụ Ubuntu na-abịa na AppArmor, modul nchekwa kernel Linux nke na-enye onye njikwa sistemu ohere igbochi ike mmemme na profaịlụ mmemme ọ bụla. Profaịlụ nwere ike inye ohere ịnweta netwọkụ, ohere oghere raw, yana ikike ịgụ, dee, ma ọ bụ mebie faịlụ n'ụzọ dakọtara. Ndị ọrụ ezinụlọ Rhel ga-achọpụta na nke a yiri Selinux; Otú ọ dị, ha na-arụ ọrụ dịtụ iche ma nwee uru na ọghọm nke ọ bụla.
Ihe ndị a ga-ekpuchi otu esi eme ma gbanyụọ AppArmor na profaịlụ onye ọ bụla; na-adịkarị, ọtụtụ ndị ọrụ agaghị adị mkpa iji AppArmor dozie ntọala ọ bụla, mana ọ bụrụ na ọ dị mkpa bilitere, iwu ụfọdụ dị mfe achọrọ na nkuzi a ga-akọwa.
Site na ndabara, arụnyere Apparmor ma gbanye mgbe ị na-etinye Ubuntu. Iji nyochaa ọkwa ya site na iji iwu a:
Na-esote bụ rundown na iwu systemctl iwu:
Ka ịkwụsị Apparmor:
Iji gbanyụọ Apparmor na buut sistemụ:
Iji malite Apparmor:
Iji mee Apparmor na buut sistemu (ndapụta):
Ka ịmalitegharịa Apparmor:
Ka ibugharịa Apparmor:
Nke mbụ, ọ dị mma ịhụ ọkwa nke profaịlụ Apparmor nke enwere ike iji ihe ndị a systemctl iwu:
N'aka ozo, i nwere ike iji ya iwu aa-ọnọdụ, nke ga-enye gị otu ọgụgụ:
Rịba ama, ị ga-ahụ nnukwu ndepụta profaịlụ na mmepụta. Ị na-atụgharịkarị azụ na iwu a mgbe ị na-elele ma agbanyere profaịlụ ma ọ bụ nwee nkwarụ n'ọdịnihu.
Ọ bụrụ na ịchọrọ gbanyụọ ụfọdụ profaịlụ Apparmor, enwere ike nweta nke a n'otu n'otu na-enweghị gbanyụọ ngwa nchekwa niile. Nke mbụ, ị ga-achọ ịnyagharịa na /etc/apparmor.d ndekọ dị ka ndị a:
Ugbu a na-eji iwu ls, bipụta ndepụta profaịlụ dị na ndekọ a:
Dịka ọmụmaatụ, iji gbanyụọ usr.sbin.cupsd profaịlụ. Iji mee nke a, jiri iwu a:
Ugbu a na iji apparmor_status iwu, ị nwere ike ịhụ usr.sbin.cupsd ewepụrụ na ndepụta profaịlụ gị.
Ihe atụ ewepụrụ profaịlụ:
Site na mbụ:
Ọ bụrụ na-amasị gị ịhụ ndepụta iwu nwere nkwarụ, gaa na directory /etc/apparmor.d/disable wee jiri iwu ls:
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmegharị profaịlụ a ma ọ bụ profaịlụ ọ bụla ọzọ nwere nkwarụ, jiri iwu a:
Ị ga-achọ reboot Sistemu gị ka ịhụ profaịlụ azụ azụ na iwu apparmor_status:
Weghachite iwu ngwa ka ịhụ profaịlụ azụ azụ:
Mmepụta nwere profaịlụ azụ:
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi agbanyụọ ma mee ka profaịlụ ya na ngwa AppArmor n'onwe ya; ọ bụrụ na ị chọrọ ime nke a, ọtụtụ ndị ọrụ agaghị mkpa ọbụna na-eche banyere nke a; Otú ọ dị, ọ bụ aka aka ịmụta ma ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu metụtara ngwa AppArmor.
Otu esi etinye Nginx Mainline kacha ọhụrụ ma ọ bụ Stable na Debian 11